"Shalay Waxaan La Joogay Lo'da Xaafadeyda, Maantana Waxaan Tababare U Ahay Xiddigaha Ugu Fiican Dunida" - Macalinka Cusub Ee Barca Oo Hadlay Markii Ugu Horeysay | Laacib.net
“Shalay Waxaan La Joogay Lo’da Xaafadeyda, Maantana Waxaan Tababare U Ahay Xiddigaha Ugu Fiican Dunida” – Macalinka Cusub Ee Barca Oo Hadlay Markii Ugu Horeysay
Tababaraha cusub ee Barcelona Quique Setien ayaa maanta oo Talaado ah loo soo bandhigay saxaafada, wuxuu 61 jirkaan sheegay inuu saaka soo kacay riyadiisa oo rumowday.
“Shalay waxaan ku dhex socday xaafadeyda anigoo garab maray lo’da, haatan waxaan joogaa Barcelona anigoo tababaraya ciyaartoyda ugu fiican dunida” ayuu yiri Setien markii la weydiiyay shaqadiisa cusub.
“Xitaa riyadeyda ugu daran kuma aanan saadaaliyeen inay sidaan dhici doonto. Waxaan ahay shaqsi qiiro badan, aad ayaana ugu faraxsanahay inaan halkaan joogo.”
Quique Setien ayaa bedelay Ernesto Valverde oo xalay laga ceyriyay shaqada tababare ee Barcelona ka dib labo sannadood iyo bar uu hogaaminayay kooxda.
“Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Ernesto Valverde oo iiga tagay koox hogaamineysa horyaalka” ayuu yiri Setien. “Hamigeyga waxa uu yahay inaan ku guuleysano wax walba. Wax walba oo lagu guuleysan karo waa inaan ku guuleysano, kooxdaan wado kale oo u furan ma jirto.”
Haddii uu jiro qof horumarin kara Barcelona waa Setie madaama uu ahaa tababarihii ugu danbeeyay ee Barcelona ku garaaca Camp Nou isagoo ka badiyay markii uu tababare u ahaa Real Betis bishii November 2018.
“Markasta uu tababare cusub yimaado, waxaa qolka labiska soo gasha tamar iyo firfircooni cusub” ayuu yiri Setien.
“Durbadiiba waad ogaaneysaa. Caaboonaantii aan ku aragnay tababarkii maanta waxaan doonayaa inaan joogteeyo taas, ma jiraan labo tababare oo isku qaab ah. Si cad ayaan u qeexay waxa ay Barcelona u baahan tahay. Banaanka ayaan ka soo arkay waxay u baahan tahay, waan soo daawaday waana soo dhiraandhiriyay.
“Intaan waa hadal uun, waxaan dooneynaa waxyaabo waara”
Setien waxaa sugeysa shaqo badan madaama Barcelona ay liidatay bilihii ugu danbeeyay ee waayihii Valverde.
Barcelona waxay ugu sareysaa horyaalka La Liga laakiin waxay isku dhibco yihiin Real Madrid. Waxaa weli sugaya wareega 16ka Champions League iyo koobka Copa del Rey oo haatan uun ay bilaabayaan.
Setien wuxuu ka soo tagay lo’dii xaafadiisa wuxuuna qabanayaa mid ka mid ah shaqada ugu weyn dunida.